MEELAHA RYZHIKI: TILMAAMAHA IYO SIYAABAHA WAXTARKA LEH, WAXA AY U EGTAHAY (SAWIR), HALKA UU KORAYO, GOORTA LA URURIYO, SIDA LOO KARSADO (QADAADIIR, PICKLE, SHIIL) - MUSHROOMS
Ryzhik mushroom: sharaxaad, meelaha koritaanka, noocyada, cunto karinta
Ryzhiki waa mid ka mid ah boqoshaada ugu caansan ee latitudes ah - ma aha oo kaliya sifooyinka wanaagsan ee dhadhanka, laakiin sidoo kale leedahay guryaha faa'iido leh. Halka ay ku koraan, noocyada ay jiraan, sida loo ururiyo loona soo ururiyo boqoshaada, aynu ka fekerno faahfaahin dheeraad ah.
Inta badan noocyada caadiga ah
Ryzhiki waxay ka mid yihiin wakiilada jilitaanka Mlechnik, oo ay ku jiraan 7 magacyada kala duwan - casaan, salmon, alpine iyo kuwo kale. Xaaladdan oo kale, waxaa la rumaysan yahay in noocyada ugu weyn ee geela hadda yihiin geedo iyo noocyo saytuun.
Iska hubi liiska boqoshaada la cuni karo iyo sunta leh, iyo sidoo kale barashada sida loola socdo boqoshaada loogu talagalay hababka dadweynaha.
Waqtiga Bisaylkiisa ee geela wuxuu dhacaa bartamihii June, waxaana laga heli karaa kaynta ka hor bilawga qaboojinta (ilaa bartamihii Sebtembar). Waxay ka tirsan tahay qaybta aan uqalmo ee boqoshaada (boqoshaada gabi ahaanba la cuni karo iyo nafaqo leh). Waxay leedahay sifooyinka soo socda:
koofiyad - midab-dhalaalaya midab-dhalaalaya, iftiin, cabbir weyn (ilaa 14 cm dhexroor). Dusha sare ee daboolka ah waa siddooyinka wareegsan, marmarka qaarkood huuri cad. Foomku wuxuu leeyahay heer caadi ah - isgoyska, Niyadjab yar ayaa laga yaabaa inuu kudhaco bartamaha albaabka, geesaha ayaa gudaha u duubi doona (gaar ahaan miisaanka waaweyn). Dusha sare waa siman, wax yar oo xoqan iyo dhajis.
lugta - qaro, ballaaran (ilaa 10 cm oo dherer ah). Midabadu waxay mar walba u dhigantaa hooska aasaasiga ah. Lugta waa ku adag tahay shcherbinka yaryar ama godad. Waxaa lagu dabooli karaa qori yar. Si aad u yar yar ee dhagxaanta hoose, sameynta siludyo aan ciriiri lahayn.
diiwaanada - dhuuban, qafiif ah, cufnaanta hoose ee daboolka. Badanaa taargooyadu waxay u soo baxaan, sida ay ahayd, saldhigga lugta ee fangaska (ku hareeraysan wax aan ka badneyn saddex meelood oo ka mid ah dhererka lugta oo dhan). Midabku waa mid liin, oo leh maro caleemo leh, laakiin markaad riixdo taarikada waxay noqon kartaa mid cagaaran.
saxarka - muraayad cufan, midab leh oo casaan leh, hawada furan waxay noqon kartaa cagaar.
casiir - qaro weyn iyo macaan, macaan u dhadhan.
Cinjirku wuxuu leeyahay macaan dhir ah, dhadhan macaan iyo dhadhan ah.
Ma taqaanaa? Ryzhiki - wakiilada kaliya ee boqoshaada ee adduunka leh caanaha caanaha caanaha.
Noocyada kala duwan ee geela waxay magaceeda ku heleen sababtoo ah qaabkeeda dhuleed - boqoshaada firxadka waxay koraan oo u dhawaadaan xididdada dhirta ama qoryaha dhirta. Waa xajmiga la cuni karo. Macluumaadka dibedda:
koofiyad - ilaa 7 cm dhexdhexaad ah, wuxuu leeyahay xarig khasab ah oo ku yaal bartamaha. Cidhifyadu waa kuwo jilicsan, oo hoos u jeexan. Da 'yarta waayeelka ah, intooda badani waxay ku qaataan qaab jilicsan. Peel adigoon dhererin. Marka hawo qoyan ay ku dhegto taabashada. Midabka wuxuu ku kala duwan yahay orange si uu u buuxsamo, garbaha iyo dhibco dhexdhexaad ah ayaa mar walba ka madow midabka salka. Haddii aad dhaawici karto maqaarka jilicsan ee furka, waxay heli doontaa midab cagaaran;
lugta - ilaa 6 cm oo dherer ah, dhuuban (ilaa 1 cm dhexroor), aad u jilicsan oo jilicsan. Qaabka cylindrical ee saldhigga ayaa yar yar. Midabku waa isku mid sida kan;
diiwaanada - Badanaa, badanaa, ku soo dheji salka lugta. Hooska hoos u dhig marka la barbardhigo daboolka;
saxarka - liinta, fasaxyada ayaa marka hore lagu rinjiyeynayaa casaan cas, ka dibna noqda mid cagaaran. Waxay leedahay dhadhan macaan oo miro leh;
casiir - qaro, casaan cas. Hawada furan waxay noqoneysaa mid cagaaran.
Waa muhiim! In kasta oo xaqiiqda ah in geela la cuni karo hilibka, waa in aanad halis gelin oo aanad cunin daaweyn kuleyl ah - dabiiciga ah, boqoshaada sunta ah iyo la cuni karo badanaa wada koraan, midba midka kale taabtaan, xarumaha sunta ahi waxay u noqon karaan fungus la cuni karo.
Elovik wuxuu ka koraa bilawga xagaaga illaa bartamaha xilliga dayrta (ilaa dhammaadka bisha Oktoobar, haddii uu jiro baraf lahayn).
Noocyada ugu caamsan ee geela, oo kordhaaya kaliya gogosha gogolka ah ee meelaha qotada dheer. Calaamadaha:
koofiyad - Baaxad weyn, cabir weyn (illaa 16 cm dhexroor), mararka qaarkoodna ku keydsan xarunta. Tilmaamo aad u cufan, fareesho. Marka la eego shaybaarka dhallinyaradu, cidhifyadu waxay ku daboolaan gudaha gudaha, dadka waaweyn, foosha si aan fiicnayn looma dhicin. Midabku waa orange-cas, iftiin, ma lumiso dabacsanaan mana noqdaan xargaha marka qoyan;
lugta - qiyaastii gaaban, ilaa 6 cm ee dhererka. Cufan aad u xoogan oo xoog leh, oo leh patina caan ah iyo gaduudan cas.
diiwaanada - Caadi ahaan, cidhiidhi ah, si xoogan hoos ugu lugta lugta;
saxarka - aad u cufan, laakiin jilicsan, hooska cad oo leh meelo dhalaalaya oo casaan ah. Dhamaan fasaxyada ka soo baxa qashirku wuxuu daadiyey casiir khafiif ah oo midab casaan leh.
Si ka duwan noocyada hoose ee geela, sida likaha gaduudka leh ma laha dhibco dhexdhexaad ah iyo goobo wareeg ah. Kala soocaa wakiillada kale ee hoosaadka joogitaanka khamriga qaro weyn ee huurka dhiigga.
Ma taqaanaa? Antibiotic xoog leh lactarioviolin, oo si guul ah u dagaallamaysa bakteeriyada cudurada, gaar ahaan, ulaha kook, ayaa ka soo jeeda dhicin.
Xogta dibedda ee dibedda ah iyo kala duwanaanshahooda kala duwan ee boqoshaada kale uma oggolaan doonto inay isku qasaan noocyada noocyada leh boqoshaada sunta ah ama aan la dabooli karin. Si kastaba ha ahaatee, ka mid ah noocyada boqoshaada waxaa jira wakiillada sida oo aan buuxa boqoshaada oo buuxa. Waxay ka tirsan yihiin fasalka IV - boqoshaada sida caadiga ah la cuni karo). Kuwani waa labada koob ee geela - Mowjado casaan, papillar iyo caraf cad oo udgoon.
Hirarka casaan. Waxay leedahay caanaha caanaha cad, oo aan madow ahayn marka ay hawadu xirantahay. Waxay inta badan koraan kalluunka qallafsan, oo ku dhow bjørk ama aspen. Marka la barbardhigo geela waxa uu leeyahay midab casaan ah oo ka mid ah saxarka, iyo lugta - yar iyo dhuuban. Mawjada casaan ma aha mid sumeynaya, hase yeeshee, daaweynta kuleylka aan ku filnayn, waxay sababtaa dhibaatooyin culus oo leh caloosha iyo mindhicirrada.
Naasaha Papylara (dib u habeyn ballaaran). Waxay ku koraan kaymaha caleemaha, waa miisaan ahaan la cuni karo. Koofiyadu waa cawl-bunni, dhexroor yar, casiirka caanuhu marwalba caddaan ah. Jidhku sidoo kale waa cadaan midab leh, oo leh dhadhan qoconut yar. Waxaa suurtagal ah in la cuno oo keliya kadib markaad isku wareejisid iyo saliin muddo dheer ah.
Mlechnik kariimka. Waxay leedahay dabool yar oo leh dhexroor ilaa 5 cm oo bunni ah. Cirifka ayaa had iyo jeer ka soo baxa gudaha gudihiisa, wax yar ka daalay qiiqa, urta aad ayuu u xoog badan yahay, basbaaska, waxay u egtahay qumbo. Marka aad cunto karisid, waxaa loo isticmaalaa oo keliya qaabka la qalajiyey ama cusbada oo loo yaqaan 'spice' si loo isticmaalo suxuunta kale.
Meelaha iyo xilli-ururinta
Ryzhiki had iyo jeer waxay ku koraan kooxo yaryar - inta badan waxaa laga helaa kaymaha isku dhafan iyo qoyan, iyo sidoo kale inta u dhaxaysa xididdada geedaha iyo dhogorta. Ma jecla qabowga, sidaas darteed waxay sameeyaan oo ay u bislaadaan bilaha diiran - laga bilaabo bilawga xagaaga illaa badhtamaha-deyrta. Xilliga Bilihii ugu Ba'an waa Julaay-bilowgii Sebtembar. Waxaa lagu qaybiyey dhammaan qaaradaha, laakiin badanaaba laga helaa aagga cimilada.
Sidoo kale akhri waxyaabaha ku saabsan qaababka faa'iido leh iyo codsiyada ku saabsan miraayadaha, dhirta, jiiska, lakabyada roodhida, roodhida cad, dhirta cad, dhirta cagaaran, geedka, .
Waa maxay farqiga u dhexeeya boqoshaada iyo dabaysha
Isbarbardhigga dibedda ee labada nooc ee boqoshaada waa mid aad u ballaaran, laakiin waxaa jira kala duwanaansho muhiim ah. Marka hore - Tani waa dabeecadda cabitaanka caanaha. In volnushka marwalba caddaan, iyo Ryzhikov - huruud ah ama oranji, kaas oo soo iibsado cagaaran cagaaran hawada u furan.
Soodhaha caanaha ah ee fangaska Mawduuca casiirka milanka casriga ah
Haddii aad soo celiso labadan xabbadood ee labadan ka mid ah, ka dibna ka eeg xarafka waxaad si fudud u kala saari kartaa: mawjadaha saxanka ayaa marwalba casaan ama cawl, laakiin boqoshaada si buuxda u aqoonsanayaan magacooda - taararkoodu waa casaan, casaan ama jaale dhalaalaya. Habka soo socda ee loo kala soocayo labadan mataano waa meesha ay ku kobcayaan.
Saxanka maqaarka ee Wafer Saxanka Fungus Fungus
Volnushka wuxuu jecel yahay inuu u koro meel ku dhow bjørk iyo geedo kale oo qallafsan, laakiin boqoshaada waxaa inta badan lagu sameeyaa gogosha gogolka iyo xididdada geedaha iyo dhirta. Ryzhik wuxuu jecel yahay ecology nadiif ah iyo hawo aan la faaruqin, sidaas darteed, ma dhicin meel u dhow jidadka wadooyinka, si ka duwan sida dabaylaha - waxay u nugul yahiin xawaaraha hawada waxayna si wayn u koraan waddooyinka.
Halbeeggan oo ka mid ah boqoshaada waxaa ka mid ah: Faytamiin, biyo, ash, fiber, monosaccharides iyo disaccharides, macdanta, fitamiinada kooxaha B, vitamin C iyo walxaha sida sodyum, fosfooraska, birta, magnesium, iwm. - 12.5%, birta - 15.5%. Saameynta BZHU waa 1.9: 0.8: 0.6 (100 garaam oo badeeco ah). Waxyaabaha kalooriga ah ee 100 garaam ee fungus waa 17 kcal, si kastaba ha ahaatee, inta lagu jiro daweynta kulaylka (gaar ahaan salting iyo shiilan), waxyaabaha korontada ayaa si weyn u kordhaya.
Ginger waa muqdishu mid aad u faa'iido leh - Maaddooyinka firfircoon ee firfircoon iyo kuwa kicinta leh ayaa waxay leeyihiin saameyn xoog leh oo ku saabsan antioxidant, xoojinta nidaamka difaaca jirka iyo caawinta yaraynta khatarta ka hortagga kolestaroolka. Waxaa intaa dheer, fangasku wuxuu ka kooban yahay antibiyootig xooggan oo ka soo horjeeda fayrasyada firfircoon ee jirka iyo bakteeriyada firfircoon (gaar ahaan, waxa uu ka takhalusaa qaaxada). Waa sifooyinka faa'iido leh ee geela oo go'aaminaya waxyeelladooda - Mushaharkan waa la cuni karaa qaddi xitaa iyadoo aan lahayn daaweyn kuleyl.
Sidoo kale, difaaca jirka ayaa si wanaagsan u saameeya: Safflower, malayga, toon, laalaabka, tufaaxa, ramson, qoryaha, walxaha madow, aloe, yicib, lakab cad, viburnum, dogwood, magnolia geedka canabka, roodhida, basil, melissa.
Marka lagu daro guryaha waxtarka leh, caano dufanku waa nafaqo leh oo dhadhan fiican leh. - Sumobada oilyada ah ma aha kuwo ka liita tilmaamayaasha dhadhanka nooca ugu caansan - mushahaar cad. Marka la eego qayb ka mid ah tamarta tamarta, boqoshaada waxay u dhowyihiin hilibka lo'da iyo turkey, iyo marka loo eego kalooriyadu waxay ka badan tahay hilibka digaaga iyo ukunta digaaga.
Fungus Tani waa in si taxadar leh u wada baabbi'iyaan dadka qaba dhibaatooyinka dheefshiidka iyo sidoo kale u nugul yahay cayilka. Laguma talin in la cuno boqoshaada kalyaha iyo cudurrada beerka (gaar ahaan marxaladda joogtada ah), haweenka uurka leh iyo carruurta ka yar 6 sano. Sidoo kale khilaafka waa burooyinka iyo boogaha caloosha, caabuqa beeryarada, astaamaha hoose ee caloosha.
Waa muhiim! Hooyooyinka uurka leh iyo kuwa nuujinaya waa inay xaddidaan isticmaalka caanaha xayawaanka - waxay si weyn u yareeyn kartaa sunta caloosha waxayna keenaysaa dhibaatooyin habka dheef-shiidka.
Saffreer iyo carafo leh caraf udgoon ayaa si gaabis ah u soo gashay khudradda - waxaa loo isticmaalaa labadaba qaab caano ah iyo sida xawaash, iyo sidoo kale saxan madax bannaan.
Mushahaan ayaa ah kuwa ugu fiican ee salting - dhadhanka miro ayaa ka dhexjirta brine sali ah, oo sameysma dhadhan tartiib tartiib ah.
0.5 kg. boqoshaada;
25 gr. cusbada;
0.5 qaado ee allspice iyo bacterialts;
Akhri sida ugu dhakhsaha badan iyo boqoshaada cusbayn leh oo la kariyey xilliga jiilaalka
Isu diyaari boqoshaada si aad u qaadatid - kala sooc, ku dhaq, ka qaad meelaha la wasakheeyey, dhulka ka gooyay lugta.
Adag oo googooyo boqoshaada (yar, waxaad si fudud u goyn kartaa nus), ku shub biyo kulul iyo ha u istaagaan 5 daqiiqo.
Musqulaha daadadeysan ayaa biyo lagu daboolay, dabeysha oo dabka lagu qabsaday 7 daqiiqo oo kale. Xumbada waxaa la saaraa xumbo.
Biyaha ka daadi, waxaan baddalnaa boqoshaada loo keenay nus-u diyaargarowga digsiga, ku shub milix iyo dhir udgoon. Ku dabool caleemaha malayga, ku dhaji maro nadiif ah oo kor ku xusan (waxaad xiran kartaa faashad) oo aad hoos u riixeyso culays culus.
Waxaan dhigeynaa faaruqinta saxda ah ee habkan oo kale ah meel qabow (heerkulka waa inuusan ka badnayn 7 ° S). Ku dhajiyay habkan 45 maalmood. Wakhti ahaan waxaad u baahan tahay inaad hubiso brine - haddii ay madow noqoto, waxaad u baahan tahay inaad ku dhaqdo boqoshaada kuna buuxi dhir cusub. Marmarka qaarkood (1 jeer 2 toddobaad) waa in sidoo kale lagu beddelo mid nadiif ah.
Mararka qaarkood boqoshaada ayaa la cusbeynayaa hab qabow. (iyada oo aan hore loo karkarin) - si kastaba ha ahaatee, saltingaha noocan ah waa in aan la siin carruurta ka yar 12 sano iyo dadka ka weyn ee dhibaatooyinka dheefshiidka.
Video: sida loo kalluumeeyo boqoshaada
Boqoshaada la badiyey waxaa loo tixgeliyaa cuntada ugu fiican iyo quruxda muraayada dhabta ah ee bilaha jiilaalka.
1 kg boqoshaada;
2.5 tsp cusbada;
3 tsp. sonkorta;
hal galaas oo khal ah 9%;
biyaha (600-700 ml).
Mushrooms si loo kala saaro oo loo dhaqo, ka saar meelo wasakhaysan iyo qaybo dhulka ah. Buuxi biyo qabow oo nadiif ah.
Ku dar milix biyo karkariyo, kari ilaa 10-15 daqiiqo. Ka dib markaa, biyaha daadi.
Ku dhaji caleen, xawaash, toon kusaddii ah nadiif nadiif ah, kudee boqoshaada la kariyey ee kusaddii.
Cun marinade - isku dar 3 tsp. milix iyo 3 tsp. sonkorta, khal iyo biyo, kari kuleyl aad u yar 10 daqiiqo.
Ka saar marinade ka soo kulaylka, ku dar basasha jar jartey.
Ku shub boqoshaada marinade kulul, adkee dhalooyinka oo iyaga nadiifin 30 daqiiqo.
Ku shub dhalooyinka, qabow buste kulul. Ku noqo meeshii ugu horreysay oo ku dhaji meel qabow mug leh (qaboojiyaha ama miiska).
Mushrooms ayaa loo diyaariyey sidan oo kale waa qallajin iyo cufnaan.
Waxaan kugula talineynaa inaad wax ka akhrido tiknoolajiyada wax lagu karsado: saliida, joodariga, boqoshaada dufanka, boqoshaada caanaha ah, ryadovki), saliida (boqoshaada la qalajiyey), qalajinta (boqoshaada lohodka), barafka (likaha, likaha cagaarka, lowska, boqoshaada, champignons).
VIDEO: boqoshaada soo baxa ee jiilaalka.
Si aad u diyaariso saxan nafaqo leh ee boqoshaada la shiilay ma qaadan waqti badan iyo dadaal - xitaa bilowga qabatooyinka waxay awoodi doonaan inay la qabsadaan daaweyntan.
Maaddooyinka ugu caansan ee boqoshaada la shiilay waa basasha. Si aad u kariso boqoshaada leh basasha waxaad u baahan doontaa:
saliid saytuun - 50 ml;
basasha - 2-3 madax;
cusbo, dhir udgoon - dhadhamin.
Iska ilaali, raaci oo ka saara wasakh ka soo boqoshaada. Iska yaree boqoshaada ee xaleef yar yar.
Karkari boqoshaada biyaha cusbaynaya 15 daqiiqo.
Biyaha ka daadi oo gali boqoshaada digsi kulul oo kulul (oo aan saliid lahayn). Sug ilaa inta qoyaanku ka baxayo.
Ku dar subagga, basasha la jarjaray iyo basbaaska. Kareey kuleyl dhexdhexaad ah 15-20 daqiiqo.
3 daqiiqo ka hor dhammaadka karinta, ku dabool daboolka daboolka iyo walaaqo boqoshaada ee casiirkiisa u gaar ah 2-3 daqiiqo.
Ku rid on saxan, qurxin leh cagaarka. Ku darso labeen dhanaan.
Video: sida loo karkariyo boqoshaada
Ryzhiki waa dhadhan fiican leh oo boqoshaada caafimaad qaba oo kaliya maaha oo kali ah oo jidhka siiya borotiin badan, laakiin sidoo kale xoojiya nidaamka difaaca, kordhinta caabiga cudurada viral. Aqoonta qawaaniinta ururinta, goosashada iyo salaynta ee boqoshaada waxay gacan ka geysan doontaa diyaarinta cunno nafaqo leh, cunto karisyo leh oo meel ku haboon ku fadhiya miiska xafladaha iyo maalin kasta.